Company နဲ့ Customer ကြား စီမံခန့်ခွဲမှု အခက်အခဲတွေ ရှိနေပြီလား?
Employee တွေအပေါ် Manage လုပ်ရတဲ့ အခါ လစ်ဟာမှုတွေ ရှိနေပြီလား?
အဖွဲ့အစည်း အတွင်း အလုပ် လုပ်ကိုင်မှုတွေ နှောင့်နှေးနေပြီလား?
ဒါဆိုရင်တော့ CRM သုံးဖို့လိုနေပြီနော်…
လူကြီးမင်းတို့ Company က Product/ Service တွေက Quality ပြည့်မှီရဲ့သားနဲ့ ရောင်းထွက်သင့်သလောက် မရောင်းထွက်တာတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေကလည်း တော်ရဲ့သားနဲ့ တယောက်နဲ့တယောက် အချိတ်ဆက် မမိတာတွေ စတဲ့ Company တွင်း စီမံခန့်ခွဲမှု အခက်တွေဟာ CRM အသုံးမပြုလို့ ဖြစ်နေရတာပါ။
CRM ကို Customer Relationship Management လို့ခေါ်ပြီး CRM က Cloud System တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် Company က Employee တွေရဲ့ Task တွေ၊ Sale Team တွေရဲ့ Sale ရရှိမှုနှုန်းတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သိရှိနိုင်ပြီး Company အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်တွေကို ရရှိလာစေမှာပါ။
မိမိ Company ရဲ့ Management ကို ခေတ်ရေစီးကြောင်း နဲ့အညီ လုပ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ လူကြီးမင်းရဲ့ Company မှာရှိတဲ့ Team တွေကို Management လုပ်မဲ့ အစီအစဉ်တွေကို CRM ထဲမှာ လိုချင်တဲ့ပုံ စီစဉ်ထားလို့ ရပါတယ်။ Employee တွေကို ပေးမယ့် Task တွေကို Priority အလိုက် Assign ချပေးလိုက်တာနဲ့ Employee ကလည်း CRM ကိုကြည့်ပြီး ပေးထားတဲ့ Task ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ အတွက် အချိန်ကုန် လူပင်ပန်း တာတွေ ဖြစ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Attachment File တွေကို Memory Stick တွေနဲ့ ဟိုစက်ကိုပေး၊ ဒီစက်ကိုယူလာစတဲ့ ကိစ္စတွေကို အတွက် အချိန်ပေးစရာ မလိုတော့တဲ့ အတွက် အလုပ်မြန်မြန် ပြီးမြောက်ပါတယ်။
Customer တွေရဲ့ Information တွေကိုလည်း CRM ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး Customer Category ကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက် စီစဉ်ထားနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Company ပိုင်ရှင်တွေ အတွက်နဲ့ Employee တွေအတွက် Customer Targeting ကောင်းကောင်း ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ လူကြီးမင်းတို့ ရရှိနိုင်မယ့် CRM ကတော့ BaaS ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ CRM ပဲဖြစ်ပါတယ်…
ဒီ BaaS CRM ကိုဘယ်လို Team တွေရှိတဲ့ Company မျိုးတွေသုံးသင့်လဲဆိုတော့…
Sales Team မှာဆိုရင် Team Member တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လှုပ်ရှားမှု Activities နဲ့ Follow-ups အခြေအနေတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်း အရောင်းအော်ဒါမှာယူမှု စတဲ့ အခြေအနေတွေကို အသေးစိတ် သိရှိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ Company ရဲ့ Sales Target ကို ပီပီပြင်ပြင် ချမှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Marketing Team တွေအနေနဲ့လည်း Sales အခြေအနေ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ Future Customer များ အခြေအနေကို လျင်လျင်မြန်မြန် သိရှိနိုင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ Company ရဲ့ Marketing Target ကို ပိုင်နိုင်စွာ ချမှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Customer Service Team အနေနဲ့ Customer တွေနဲ့ မေးမြန်းစုံစမ်းမှု၊ Feedback နဲ့ Reply တွေအပေါ် ပြန်လည် ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ အခြေအနေ များကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး Record ချန်ထားနိုင်သဖြင့် ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Inventory and Purchasing Team အနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ Supplier တွေနဲ့ Company ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ၊ ဈေးနှုန်း အချက်အလက်တွေ၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာချုပ်စာတန်းတွေ ကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး Purchasing Management ကို အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။